SHIFTUMMAAFI WANBADUMMAADHAA?-Jaaawar Mohaammadii’n – Beekan Guluma Erena
SHIFTUMMAAFI WANBADUMMAADHAA?-Jaaawar Mohaammadii’n	Beekan Erena
SHIFTUMMAAFI WANBADUMMAADHAA?-Jaawar Mohaammadii’n
#‎OromoProtests‬ maqaaa daanyota mana murtii Godina Harargee Lixaa kanneen dargaggoota mormii irratti Hirnatti qabaman irratti murtii hidhaa yeroo dheeraa dabarsan san maqaa ergaa baafnee booda, dhaamsa nuu dhaamaniin, ‘ warri nuti murtii yeroo dheeraa itti murre warraa yakka ‘shiftummaafi wanbadummaa’ raaw’ateedha jedhaan.
Mee jarana joolleen sun gaara kamitti shaffatte? Ummata nagayaa kam saamte? Namni seera baratee haqa ummataatin dhugaan mura jedhee kakuu gale tokko dargaggoo haadhaa abbaa jalaa guuranii sobaan yakkan irratti murtii hammanaa fe’ee amma ammoo osoo hin saalfanne shiftaa, wanbadee yoo jedhee waamu maal jennaan?
Ilmaan oromoo mirga isaanitiif falmatan maqaa wanbadee itti maxxansanii hidhuufi ajjeesuun isinin hin eegalamne. Bara Haylasillaasee achuma Baha Oromiyaa Gubbaa Qorichaatti namonni Oromoon har’aa goota seenaa dalage jedhanii faarfaman kanneen akka Ahmed Taqiifi Elemoo Qilxuu shiftaa jedhamanii ajjeefaman reeffi isaanii ummatatti mul’ifamaa ture. Kan irraa hafan ammoo hidhaa waggaa dheeraatiin dararaman. Gaafa Darguus Motoalaqaa Zallaqaan shiftaa, wonbadee, sargo gab taappellaa jedhu itti maxxansee kumaatamaan rashanaa ture. Kan rabbi hambise hidhaa waggoota dheeraatin waxale. Gaafasis daanyotuma isin dura barcuma isin har’a irra teessanirra taa’aa turetu murtii siyaasaa kan seeraa fakkeessee du’aafi hidhaa qabsaa’ota Oromoo irratti murteessaa ture. Isinis shiruma dhaaltan itti fufaa jirtan.
Wanni nama gaddisiisu garuu qabsaa’ota Oromoo gaafas Wanbadee jedhamee adamsamee wareegame santu nafxanyyoota barcumaarraa fonqolchee xaddacha har’a isin itti yakka dalaydan kana isin dhaalchise. Borus wareegamuma joollee har’a isin wanbadee jettanii murtii gara jabinaa itti dabarsitan kanatu isin fonqochee abbootiin seeraa dhugaaf dhaabbatan akka isin dhaalan godhuuf taa’a.
Ilmaan Oromoo ogummaa seeraa barattanii abbaa alangaafi abbaa murtii ta’uun tajaajilaa jirtan walitti qabnee abaaruu hin feenu. Dhiibbaa siyaasaa isinirra jiruun akka seeraatti dhugaa muruu akka hin dandeenye ni beekna. Hedduun keessan dhiibbaa san jalaa mimmiliqaa ummata keenya dhugaan tajaajiluuf yaalii jabaa godhaa akka jirtanis ni beekna. Namonni muraasni alagaa gammachiisanii aangoo dabalachuuf jecha ilmaan Oromoo mirga abbaa biyyummaatiif falmatan irratti hidhaa dheeraa dabarsaa jiran garuu itti gaabbu. Aangoon siyaasaa ni dhufti ni deemti. Ummanni isin tajaajiltan garuu barbaraan jiraata. Aangoo Wayyaanee tan Gadaa takka hin turreef jecha dirmammuu ummanni hin irraanfanne hin dhiisina. Ogeeyyota seeraatin kan jechaa jirru bahaatii ummata waliin falmaa miti. Hojiidhuma keessan keessatti ummataaf xiqqo nahaa. Akkasiin waaqaafi ummata birattis galata olkaawwattan.
← Asoosama “DHEEBUU JAALALAA” KUTAA 2FFAA-Rbuma Ggcn’tiin
DHAAMSA HATATTAMAA HAWAASA OROMOO BIYYA KEESSAAFI ALA JIRAATAN MARAAF. Dubbifamuu Qaba →